Rag Kooxda UGUS ka tirsanaa oo maanta xukun toogasho ah lagu fuliyay – Radio Muqdisho
Rag Kooxda UGUS ka tirsanaa oo maanta xukun toogasho ah lagu fuliyay
Dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dadaalka tooska ah ee ay kula jirto kooxda nabad diidka ah UGUS waa dagaal aan dhammaan doonin ilaa la dabar gooyo kooxdaas, maadaama ay dadka iyo dalkaba duulaan ku yihiin.
Sidoo kale Maamulka Puntland waxay cadaynaysaa inay shareecada islaamka iyo qawaaniinta dalka marinayso qof kasta oo ay ku caddaato kamid ahaanshaha kooxda burcad diimeedka ah ee UGUS Al-Qaacida.
Sidaa darteed, wasaarada amniga ee dawladda goboleedka Puntland waxay maanta si buuxda laamaheeda amniga u fuliyeen dil toogasho ah oo lagu xukumay xubno dambiilayaal ah oo ka tirsanaa oo ahaa saddex qof.
1: Maxamed Cabdi Axmed oo la baxay ” Olol”
2: Xaajow Shiikh Nuur Cismaan oo la baxay ” Shiishaan”
3: Ismaaciil Cabdulqaadir Jaamac oo la baxay ” Rabbiile”
Xubnahaas oo dhammaantood ay ku caddaatay inay xubin ka ahaayeen UGUS isla markaana Maxkamada ciidanka Puntland ay ku cadaysay dambiyada ay gaysteen ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 16-3-2015 waxaa lagu toogtay magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Barri ee Dawladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland.
Gudoomiye Jawaari oo Hambalyo u direy dhigiisa Jabuuti
Akhriso: Shuruudaha labada gudi ee doorashooyinka iyo Xuduudaha